Ndinofanira Kutenga Yakagadziridzwa MacBook Pro, iPad Mini, kana Mhepo? - Mac
nei wont netflix mutoro pane yangu ipad
iphone izwi meseji harisi kushanda
isingakwanise kugadzirisa wachi yeapuro
Ndinofanira Kutenga Yakagadziridzwa Macbook Pro, iPad Mini, iPad Mhepo, kana Apple Chigadzirwa?
Iwe wave kuda kutenga chigadzirwa cheApple, uye uri kushamisika kana chiri icho chaizvo zano rakanaka kutenga rakagadziriswazve MacBook Pro, iPad Mhepo, iPad Mini, kana MacBook Mhepo. Izwi chete rekuti 'kugadziridzwa' rinoita kuti vanhu vasanetseke, uye zvinonzwisisika kudaro: Kune imwe kambani, kugadzirisa kwacho kunogona kusanganisira kupfira mate uye mamvemve akanyorova, asi kuna Apple, kugadziridzwa zvinoreva a zvimwe zvakawanda .
Muchinyorwa chino, ini ndichatsanangura iyo chaiyo mutsauko uripo pakati pekutenga MacBook Pro nyowani nekugadziriswazve, Mini Mini, iPad Mhepo, MacBook Mhepo, kana chimwe chigadzirwa cheApple, ndeipi nzira yekugadzirisa yeApple chaizvo inotaridzika, uye nekugovana ruzivo rwega neyakagadziridzwa zvigadzirwa zveApple kubva panguva yangu semushandi weApple uye mutengi.
Ndeupi Musiyano uripo Pakati Pekutenga Yakagadziridzwa Uye Nyowani MacBook Pro, iPad Mini, iPad Mhepo, MacBook Mhepo, Kana Zvimwe Apple Chigadzirwa?
Paunenge uchifunga nezve kutenga kutenga yakagadziridzwa, zvakakosha kuve neruzivo rwakawanda sezvinobvira. Kuita kuti zvinhu zvive nyore, ini ndakasanganisira mhinduro kumibvunzo inowanzo bvunzwa yandinogamuchira nehukama kune zviri pamutemo Apple zvinyorwa kana iwe uchida kudzidza zvakawanda.
Zvese zvitsva uye zvakagadziridzwa zvigadzirwa zveApple zvinouya zvakafanana Rimwe-Gore Rine Zvikwereti Waranti .
Sezvakangoita warandi maitiro, zvese zvitsva uye zvakagadziridzwa zvigadzirwa zveApple zvakafanana 14 mazuva ekudzoka mutemo .
Iyo Yakanaka Dhinda
Kana uchida kuverenga Tsananguro yeApple yepamutemo nezve Apple Certified Yakagadziridzwa Zvigadzirwa , webhusaiti yavo ine tsananguro yakadzama pamusoro pematanho ese avanotora kuti vave nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvakagadziridzwa zvakanaka senge nyowani.
Iyo Imwe Musiyano Pakati Patsva Uye Yakagadziridzwa MacBook Pro, iPad Mhepo, iPad Mini, MacBook Mhepo, uye Zvimwe Apple Zvigadzirwa
Ikoko ndizvo mutsauko mumwe pakati pezvitsva uye zvakagadziridzwa zvigadzirwa zveApple. (Drumroll, ndapota.) Bhokisi!
Ichokwadi Nezve Kugadziridza Apple Zvigadzirwa
Pandaimboshandira Apple, mubvunzo wakajairika wandaiwanzo kuwana waive pamusoro pekuti Apple inogadziridza sei zvigadzirwa zvavo. Muchokwadi, inzira yakafukidzwa nechakavanzika. Kana Genius adhonza chikamu kubva kuseri kweGenius Bar, hapana munhu anoziva kana chikamu icho chitsva kana chakagadziridzwa.
Se parutivi, kumwe kwekunyunyuta kwakajairika kwandaigamuchira kubva kuvanhu vane zvishandiso zvandanga ndichigadzira zvakaenda chinhu chakadai.
“Ini ndakangotenga iPhone nyowani nyowani ichibva yadambuka nekuda kwekukanganisa kwangu. Zviri pasi garandi. Nei uri kundipa chikamu chakagadziridzwa? ”
Ndichiri kunzwira tsitsi neiyi tambo yekufunga, kana iwe uchipfuura neAppleCare kana iyo Genius Bar, Apple techs kwete ziva kana chikamu chavari kupa mutengi chiri chitsva kana kugadziridzwa. Chokwadi, havafanirwe kunge vakakwanisa kutaura, nekuti chikamu chinofanira kugara chisingazivikanwe kubva kuchinhu chitsva. Apple inoisa yakakwira mwero uye mune yangu ruzivo, kazhinji nguva dzose inorarama maererano nayo.
Ndinoziva Sei Kana Iyo Apple Chikamu Yakagadziridzwa?
Chokwadi ndechekuti, hauna. Kunyatso tarisa garandi kunoratidza kuti pese panopinda chero chinhu paMac yako, iPhone, kana iPad, Apple inochengetera kodzero yeku 'gadzira Apple Chigadzirwa uchishandisa zvikamu zvitsva kana zvakamboshandiswa zvakaenzana nezvitsva mukuita nekuvimbika.'
Apple inoisa mwero wehunhu mune zvemagetsi zvemagetsi, uye varidzi vePad, Mac, uye iPhone zvinonzwisisika kuti vatarisire padyo-kukwana pamutengo wepamberi wavanobhadhara. Dai ndanga ndichitsiva chikamu chemutengi uye ikaratidza kunyangwe kusakwana kudiki, ndaizoitumira kuti iverenge uye ndikumbire imwe.
Usatye Zvekuipa Bhokisi: A Ndokutendai Kune Apple Vatengesi
Ndinoyeuka kutaridzika kunotyisa kwandaizogamuchira kubva kune vatengi apo anofara ekuverenga nyanzvi aindiunzira chinotsiva iPhone, iPad, kana chimwe chigadzirwa cheApple kubva kumashure kwechitoro. Panzvimbo pebhokisi rinopenya raApple vatengi vajaira, Apple yaishandisa aya akashata, kurova mabhokisi matema kutumira zvimwe zvinotsiviwa nekudzoka nekudzoka kufekitori. Kunyangwe chikamu mukati chingave chitsva (kana kugadziridzwa - hatingazive…), chokwadi chekuti chigadzirwa 'chitsva' chaizouya mubhokisi rakadai chakasiya kuravira kwakashata mumiromo yevamwe vatengi. Pakupedzisira Apple yakadzokera kumashure kushandisa machena machena makadhibhokisi mabhokisi ekutumira neshure, uye izvo zvakaita kuti hupenyu hwangu setekinoroji huve nyore kwazvo.
I 'Unofficial' Chokwadi Nezve Apple Kugadziridza Maitiro
Ndiri kuzogovana zvishoma zvemukati ruzivo newe nezve Apple yekugadzirisa maitiro. Handina kumbobvira ndanzi 'zviri pamutemo' nditaure chero izvi, asi ini ndichazvipa kwauri kuti iwe ugone kusarudza kuti zvinoita sezviri chokwadi here.
Kunge chero komputa, iyo iPhone, iPad, kana iPod ingori muunganidzwa weboka rose rezvishoma zvidiki zvemagetsi zvigadzirwa. Sezvo mazhinji ezvikamu anodhura Apple pennies kuburitsa, kana yakaremara iPhone ikadzoserwa kufekitori, ruzhinji rwezvikamu zvinokandwa kure pakarepo. Kune zvikamu zvidiki chaizvo izvo zvakanyatso kununurwa uye kuiswa kuburikidza nekugadzirisa maitiro, uye aya ndiwo matunhu anodhura zvakanyanya kuburitsa pakutanga.
Zvinoenderana neyangu isiriyo sosi, zvinhu zviviri izvo Apple zvinoita kugadzirisa paPad Airs, iPad Minis, iPhones, uye iPods ndeyeLCD uye nebhodhi rine pfungwa. Mune mamwe mazwi, zvese zvaunogona kubata paPad Airs, iPad Minis, uye maPod ndizvo nguva dzose itsva. Zvimwe chete zvemukati zvemukati zvinokwanisa kugadziridzwa.
Kuiputira Iyo Kumusoro: Kuti Utenge, Kana Kuti Usatenge?
Iwe wakazvipa zvakawanda zvekufunga uye wagadzirira kutenga iyo Macbook, iMac, iPad, kana chero chimwe chigadzirwa Apple chawave uchinyura pamusoro. Kana zvasvika pakusarudza kana kutenga MacBook Pro yakagadziridzwa, iPad Air, iPad Mini, kana Macbook Air, pane musiyano mumwe chete: Bhokisi.
Kugovera zvimwe zviitiko zvenguva pfupi yadarika, mugore rekupedzisira shamwari yakanaka yakatenga yakagadziridzwa MacBook Pro uye ini ndakatenga iyo yakagadziridzwa iPad. Kunze kwebhokisi jena jena ravanopinda, zvigadzirwa zvakagadziridzwa zveApple zvinoonekwa zvakafanana chaizvo nezvigadzirwa zvitsva. Kana iwe uri mumusika weiyo iPad Mhepo, iPad Mini, MacBook, kana chimwe chigadzirwa cheApple, Ini ndinokurudzira nemoyo wese kutenga chigadzirwa chakagadziridzwa cheApple kana mukana wacho ukazviratidza.
Yakanakisa rombo rakanaka, uye ndinotarisira kunzwa kubva kwauri muchikamu chemashoko pazasi,